Zimbabwe Yokurudzirwa Kuita Sarudzo Dzakachena seDzakaitwa muAmerica
WASHINGTON — Mutungamiri weAmerica, VaBarack Obama, avo vakasarudzwa neChipiri kuva mutungamiri weAmerica wechimakumi mana neshanu, munhu ari kukorokotedzwa kubva nenyika dzemuAfrica kuCape kusvika kuCairo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti VaObama, mutemu yavo yechipiri, vanofanirawo kuti vanyatsotarisawo matambudziko eAfrica uye kutanga kudyidzana nayo munyaya dzekutengeserana.
Mutemu yavo yekutanga, VaObama vakangoenda kuAfrica kaviri pavakaenda kuEgypt neGhana. VaObama vainyanyosimbirira nyaya dzekuMiddle East sezvo America yange iri muhondo kuIraq neAfghanistan.
Izvi zvakapa China mukana wekutanga kudyidzana neAfrica zvakanyanya kukunda America.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinotiwo nyaya yekuti China yave kunyanya kudyidzana neAfrica ndiyo yakapa kuti VaObama vatumire gurukota ravo rezvekudyidzana nedzimwe nyika, Amai Hillary Clinton, kuti vaende kunyika nhanhatu dzemuAfrica dzinoti, South Sudan, Senegal, South Africa, Uganda, Kenya neMalawi.